"Mukhtar Roobow siyaasiyiin KG ayaa codsaday in la xiro welina raba inuu sii xirnaado" Wasiir hore oo kashifay.. | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirkii hore ee Maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aaden Fargeeti ayaa kla hadlay xariga Sheekh Mukhtaar Roobow, isagoo kashifay arrimo badan oo ku xeesan arrintiisa iyo siyaasiyiinta Koonfurgalbeed.
Qoraalkiisa oo xasaasi ah hoos ka akhriso:
Arrinta Sheekh Mukhtar Roobow waa arrin aan si dhow ula socdo oo ilaa iyo hadda dadaalo badan ku bixinayno sidii uu xoriyadiisa xaqqa u leeyahay u heli lahaa. Laakiin ma ahan arrin sahlan waxaan rabaa in dadka fahmaan in xarigga Sh Mukhtar uu leeyahay wejiyo badan oo siyaasadeed, amni, sharci iyo qabiil intaba leh.
Dadka difaacaya xirnaashihiisa waxay u badan yihiin dad caatifiyan taageersan dadkii ka dambeeyay xarigiisa waxayna ku doodaan inuu argagixiso ahaan jiray ama uu ka biyo diiday soo jeedintii Dowladda oo ahayd inuusan isa soo sharaxin.
Labaduba ma ahan arrimo si sharci ah loo wajahay oo ay maxkamad lala tiigsaday. Dad badan oo ay isla soo garab dagaalameen ayaa hadda xilal sarsare ka haya Dowladda. Isagana si cad ayuu uga tanaasulay fikirkaas, ficliyana uga soo horjeestay kooxdaas.
Laakiin marka aragtid sida loo xormeeyo shaqsiyaad weli fikirkaas ku taagan ama kuwo dembiyo jariimo ah sameeyey waxaa iska cad in xariga Sh Mukhtar uu leeyahay weji qabiil leh. Arrinta musharaxnimada waa mid Dastuurka u ogalaanaya laakin inay munaasab ahayd iyo in kale waa arrin siyaasadeed.
Dhanka kale, Sh. Mukhtar xirnaashihiisa siyaasiyiin KG ayaa codsaday welina raba inuu sii xirnaado, Dowlada dhexe waxay amartay in la soo xiro, Itoobiyana waxay fududeysay soo xiritaankiisa. Markaa in isla iyagii laga codsado caddaalad waa wax mala-awaal ah. Dadyowga KG iyaga ayaanba siyaasiyan iyo amni ahaanba xor ahayn.
Deegaanada KG waxay ku jiraan go’doon amni siyaasiyana wey cabursan yihiin. Isku haleynta ciidanka Itoobiyanka ee madaxtooyada KG ilaaliya ayaa marka hore u baahan in laga tashado.
Midda labaad, siyaasiyiinta KG ku matela Dowladda dhexe ayaa u muuqda kuwo aan xor u ahayn fikirkooda. Taas ayaa keenaysa in cadaalad laga raadiyo wadanka dibediisa ilaa laga helayo xoriyad gudaha ah iyo isbedel dhab ah.
W/Q: Maxamed Aden Fargeti
Wasiirkii hore ee Maaliyadda Somalia